Waxaan ahay qof uur leh. Waxaana doonayaa in aan ilmaha dhallo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo hadda? – Tips for refugees
Previous Previous post: Qof aynu is naqaano ayaa ii sheegay in uu i jeceylyahay. Laakiin anigu ma jecli. Sidee ila gudboon in aan u dhaqmo?
Next Next post: Hore ayaan galmo u sameeyay. Waxaana ku qaatay lacag. Ma tahay midaasi mid reeban ama mamnuuc ah?